"Customer first" Tsy maintsy ny Mantra | Martech Zone
Ny fampiasana ny herin'ireo teknolojia ara-barotra be pitsiny maro misy dia hetsika tsara ho an'ny orinasa, saingy raha tsy tadidinao foana ny mpanjifanao. Ny fitomboan'ny orinasa dia miankina amin'ny teknolojia, zava-misy tsy azo iadian-kevitra izany, fa ny tena zava-dehibe noho ny fitaovana na ny rindrambaiko dia ny olona amidinao.
Ny fahafantarana ny mpanjifanao raha tsy olon-kafa mifanatrika izy ireo dia manana olana, fa ny habetsaky ny angon-drakitra an-tsehatra dia midika fa ny mpivarotra mahay dia mahazo sary malalaka kokoa noho ny teo aloha. Ny fanarahana ny metrika mety sy ny fanatanterahana ny famakafakana haino aman-jery sosialy mety fanekena ny mpanjifa tena izy mora kokoa noho ny teo aloha ary manampy amin'ny fanatsarana ny fahalalanao ankapobeny ny momba ny mpanjifanao.
Ny fomba niovan'ny fanantenana sy serivisy ho an'ny mpanjifa
Tonga saina fotsiny ny mpanjifa amin'ny fomba hidirany marika, indrindra amin'ny fitomboan'ny media sosialy. Ary, avy eo, midika izany fa nanjary nitaky fitakiana be kokoa ny zavatra nandrasan'izy ireo. Ity fangatahana ity dia tsy tokony ho hitan'ny ratsy amin'ny marika satria fotoana mety kokoa hanolorana serivisy sy traikefa ho an'ny mpanjifa ary mampiseho ny kalitaon'ny orinasan'izy ireo.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy dia nanjary fanao, miaraka amin'ny fanadihadiana iray manolotra izany 32% ny mpanjifa dia manantena valiny avy amin'ny marika ao anatin'ny 30 minitra, miaraka amin'ny 10% fanampiny manantena zavatra hiverina ao anatin'ny 60 minitra, na mandritra ny "ora fiasana" na amin'ny alina na amin'ny faran'ny herinandro.
Ny isan-karazany amin'ny fitaovana martech be pitsiny misy mba hanangonana sy handinihana angon-drakitra dia nanampy betsaka koa, miaraka amin'ny fanadihadiana an-tranonkala miaraka amin'ny fanarahan-dia ny fidirana an-tserasera, ny angona CRM, ary ny statistika mifandraika amin'ny fisintomana na ny isan'ny fisoratana anarana. Ny habetsaky ny karazana data dia mamela ny fahamendrehana amin'ny famaritana ireo mpanjifa kendrena ary mamolavola ny fanentanana arak'izany.
Ity dia betsaka ny mitantana sy mitazona eo an-tampony, ary azo takarina fa ny marika iray dia mety hitolona amin'ny fitazomana ny zava-drehetra hilamina. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fampiasam-bola amin'ny haitao mahitsy ary ny antony fampiasana ny fitaovam-pitsikilovana sosialy sy ny lozisialy any ivelany. Mba hanamorana ny fitantanana ny angon-drakitrao ho tombontsoan'ny mpanjifanao, ireto singa manaraka ireto dia tokony ho dinihina ifotony.
Ny fahalalana ny ataon'ireo mpifaninana aminao dia ivon'ny fitadiavana ny zony sy ny tsy mety ao anatin'ny orinasao. Azonao atao ny mametraka ny mpifaninana aminao amin'ny alàlan'ny fanarahana fotsiny ny fahombiazany sy ny tsy fahombiazany ary ny fikitihana ireo zavatra tiana sy tsy fankafizan'ireo mpihaino.
Ny fanaraha-maso sy ny benchmarking an'ny mpifaninana dia ahafahanao mahita ny toerana misy anao eo amin'ny sehatry ny indostriao ary hiasa hanatsara izany raha ilaina izany. Azonao atao ny mamakafaka ireo karazana metatra mitovy amin'ny hetsika ara-tsosialin'ny mpifaninana aminao rehefa manao ny anao manokana ianao, mandanjalanja ireo refy tsy mitombina amin'ny angona azo tsapain-tanana kokoa azonao angonina.
Famaritana mpijery kendrena
Miaraka amin'ny fampahalalana marobe momba ny mpihaino antsika, tsy misy fialan-tsiny ny tsy fanaingoana manokana ny atiny sy fanomezana traikefa ananan'ny mpanjifa miavaka. Amin'ity ohatra ny marika sy homeware marika manaraka ity dia azo atao ny mahita ny fomba Ny fahafantarana ny tombotsoan'ny mpanjifany dia afaka manampy azy ireo amin'ny drafitra fanentanana ho avy.
Ity data ity dia mety ho toa kisendrasendra fa tsy misy. Raha jerena akaiky ny angon-drakitra Sotrender, dia asehony manaraka izay toerana tena hanaovana ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny ho avy sy ny lohahevitra mety hahasarika ny mpihaino azy amin'ny fomba mandaitra. Ny fananana izany fampahalalana izany dia zava-dehibe amin'ny famolavolana fampielezan-kevitra amin'ny ho avy sy fanampiana mba hahazoana antoka fa tsara toerana indrindra ho an'ny sehatra fifamatorana ambony kokoa izy ireo.
Inona no tadiavin'ny mpanjifanao? Mety fantatrao izay tianao hampivoarana fa izay tadiavin'ny olona ve? Na ny valiny tsy ampoizina amin'ny alàlan'ny media sosialy dia azo ampiasaina tsara amin'ny fampandrosoana ny vokatra ary afaka misafidy ny handeha lavidavitra kokoa ianao ary hampiditra ny mpanjifanao amin'ny fivoaran'ny vokatrao.
Coca Cola dia nanao izany tamin'ny azy ireo Marika VitaminWater tahaka azy ireo niara-niasa tamin'ny fanbase Facebook-dry zareo mahita olona hanampy mamorona tsiro vaovao. Nomena $ 5,000 ny mpandresy hiara-miasa amin'ny ekipa fampandrosoana amin'ny famoronana tsiro vaovao ary niteraka fiakarana goavana izany miaraka amin'ireo mpankafy Facebook VitaminWater Facebook mihoatra ny 2 tapitrisa tafiditra ao anatin'ny dingan-dohan'ny fampandrosoana.
Famantarana sy tanjona kendrena
Ao anatin'ny sehatry ny sehatra rehetra dia misy ankehitriny ireo mpanan-kery lehibe izay mitazona fatratra sy fiheverana lehibe ao anatin'ny fiarahamonina an-tserasera. Ny marika dia miady aminy hifaneraserana amin'ireto influencers ireto, mandany fotoana betsaka ary na dia ny fampiasam-bola ara-bola aza mba handresena lahatra ireo influencer hampiroborobo sy hiaro ny vokatr'izy ireo.
Miaraka amin'ny influencers makro sy micro izay be fangatahana, ny orinasanao dia mila mahita ireo afaka miaro ny orinasanao ary mifanandrify indrindra amin'ny mpanjifanao kendrena. Miaraka amin'ny mantra 'mpanjifa voalohany' dia tokony hitady influencer izay misy dikany amin'ny mpihaino anao ary mety ho fanampiana sarobidy amin'ny ezaka ara-barotrao, fa tsy hoe "olona" manana anarana sy isa mpanara-dia mendrika fotsiny. Ny famaritana ireo influencer mety ho an'ny marikao dia tena manandanja tokoa amin'ny fahombiazana amin'ny zava-kanto misoko mangina marketing marketing.
Te hametraka ny marikao ianao ho toy ny mpiavonavona amporisihan'ny mpanjifa, saingy mba hahatratrarana ny fisoloana vava dia tokony hifantoka tanteraka amin'ny mpanjifa ianao. Mora tokoa ny mifonosona amin'ny haitao ary manadino ny lafiny maha-olombelona ny ezaky ny varotrao. Eo ny teknolojia manampy sy manampy amin'ny fanomezana traikefa mety indrindra amin'ny mpanjifa.
Tags: fampitahanafamakafakana mpifaninanampanjifa alohaFacebookmpijery kendrena
Ny dokam-barotra amin'ny programa dia mividy ny lazanao?